Pakistàna: Ny Lova Navelan’i Benazir Bhutto · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 26 Avrily 2018 12:29 GMT
Toy ny efa lefy ilay vaovao momba ny fahafatesan'i Benazir Bhutto. Mifantoka tanteraka amin'izay mety ho lova navelan'i Bhutto ireo mpitoraka bilaogy. Avy amin'ny fianakaviana iray matanjaka amin'ny lafiny rehetra i Buttho, ary araka ny fomban'ny politika any Azia Atsimo, ny ankamaroan'ny fifandirana dia mirona mankany amin'ny adihevitra momba ny vokatr'izany eo amin'ny fianakaviana sy ny Antokon'ny Vahoaka any Pakistan.
Asongadin'i Baithak fa mifono kiantrano an-trano ny fanirian'i Bhutto farany.
Na misy maro afaka ny ho mpilatsaka ho fidiana aza ao amin'ny antokon'i Bhutto, tsy misy tiany ireo afa-tsy ilay zanany lahy 19 taona, Bilawal Zardari, izay nanaiky avy hatrany teo imasom-bahoaka fa hanova ny anarany ho Bilawal Bhutto Zardari… Ankehitriny, nandresy ny fitiavan-kely – nandresy ny tsy rariny – nandresy ny kiantrano an-trano – nandresy indray – ary very ianao, izaho ary i Pakistana.
Nitarin'i Chapati Mystery io rafi-pisainana io ary resahany ny momba ny fototra feodaly ao amin'ny politikan'ny fanjakan'i Pakistàna. Rehefa mahazo antoka ny fianakaviana matanjaka fa hijanona eo amin'ny fitondrana, dia tsy avelany hipoitra ny mpitarika avy amin'ny fianakaviana hafa.
Tsy misy demokrasia ivelan'ny antoko, tsy misy antony tokony hijanonana ao anatiny. Azo antsoina hoe aloky ny rafitra feodaly tsy voakitika navelan'ireo sarintsarinà revolisiona maro izy ity ; azo atao ny manasongadina ny tantara lavan'ny fanitàrana ny torolàlan'ny olo-masina silamo/ara-panahy ho amin'ny sehatra politika ; azo ahilika ho andraikitry ny mpikambana ao amin'ny PPP ny tsy fisian'ny fanabeazana ara-politika sy ny fidirana amin'ny làlana mankany amin'ny fitondrana; ary azo ekena fa ny fitondrana miaramila no nahataraiky ny sehatra politika ara-dalàna rehetra, mba tsy hisian'ny fifandimbiasana tsotra izao ho an'ireo mpitarika ho avy – Bhuttos, Jatois, Bugtis, Sharif. Na inona na inona zavatra tianao hatao, ny marina dia mijanona ary hijanona ho sehatra ho an'ny taranaka ny ‘politika’ any Pakistana, fanomezam-pahasoavana naorina manodidina ny fanandratana olona – mandra-paha ary madram-pisian'ny politikan'ny fifidianana manana fototra tsy azo hozongozonina.
Toa niteraka fahatsiarovana mifantimpantina ihany koa ilay fahafatesan'i Bhutto tao anatin'ny toe-javatra feno herisetra. Toa adinon'ny olona ny momba ny kolikoly nanenjehana azy, ary misy fiheverana azy ho mendrika kokoa noho ireo mpitarika politika hafa ao Pakistana. Manan-javatra ho tantaraina betsaka momba io resaka io i Crow's Nest.
Fa ankoatra izany, isaky ny misy maty dia heverina foana fa any amin'ny hazavan'ny lanitra mamirapiratra izy (lahy na vavy) manadio ny haratsiany rehetra sy ny fisalasalàny tamin'ny fiainany. Nopotehin'i Benazir sy ny vadiny nandritra ny fitondrany tamin'ny andian-taona 90 ity fireneny ity, saingy rehefa tonga ny fotoana nahafatesany, nadinoin'ny vahoaka 144 tapitrisan'ity firenena ity ny zavatra ratsy rehetra momba azy ary nanomboka nadraradraraka ny karazana fideràna azy ho toy ny anjely nekena ho an'ity firenena ity ry zareo.
Araka ny voasoratra ao amin'ny didim-panànan'i Bhutto, dia ny zanany lahy Bilawal Bhutto Zardari no notendrena ho filoha vaovaon'ny Antokon'ny Vahoaka Pakistane, nanoloana ireo mpanao politika hafa manana traikefa ao amin'ny antoko. Tovolahy 19 taona i Bilawal, nianatra tany Oxford tany Angletera. Hoy All Things Pakistan.
Ambonin'izany, iriako (na dia heveriko aza fa mety tsy ho izany) ny hanokafan'ny Antoko ny zotran'ny fitarihany sy ny fomban'ny demokrasia anatiny ao aminy. Ary koa, misy ny tahotra hoe raha voafidy izy dia betsaka ny hiezaka “hilalao” azy ka ho lasa ” printsy saribakoly” izy. Tena antenaiko fa tsy hiseho izany rehetra izany.
Mandritra izay fotoana izay, ahoana ny amin'ireo endrika hafan'ny lova navelan'i Bhutto. Niverina teto Pakistàna i Bhutto taorian'ny fepotoana iray naharitra valo taona. Niova tanteraka ilay Pakistàna fantany. Niteraka herisetra teny an-dàlambe ny fahafatesany, fandrobàna sy korontana. Resahan'i Metroblogging Islamabad ny vokatr'ireo sy ny fahaverezana'ny fanànam-bahoaka.
Izahay, vahoakan'i Pakistàna, dia nahafaty olona manodidina ny 50 tao anatin'ny 3 andro farany. Nandoro banky 170 izahay. Nopotehinay tanteraka ny fiantsonan'ny fiarandalamby 18. Lava ny lisitra. Dia miteny izahay fa misaona. Izany ve no fomba fisaonana ? Tsara ny maneho fihetseham-po, saingy tsy tokony havelantsika hiala amintsika ny fisainana. Ankoatry ny famoizana aina, izay tsy voafaritra ny vidiny, dia nahatonga ny fahaverezam-bola tao amin'ny Tahirim-bolam-panjakana izahay, nandrava orinasa sy fananan'olona manokana izahay.
Ankoatra izay, nahoana no nanomboka ireny korontana ireny ? Iza no mahatezitra ny olona ? Iza no tena tompon'andraikitra tamin'ny famonoana an-dramatoa iny? Misy ihany koa ny porofo matanjaka momba ny fanafenan-dainga, toy ny fanizingizinan'ny governemanta pakistaney fa tsy maty noho ny tifitra nahazo azy i Bhutto, fa maty tamin'ny fiezahany hiala ny tifitra, ka nidona tamin'ny famohana ny tafon'ny fiara ny lohany. Manazava ny antony nampihanaka ny korontana taorian'ny fahafatesan'i Bhutto i Pakistani Spectator.
Tsy mampino hoe ny famohana ny tafon'ny fiara no nahafaka ny ainy. Ary tsy misy ilàna azy ny fanambaràna fisaonana nataon'ireo MNA taloha, Kashmala Tariq-n'ny PML (Q) sy i Altaf Hussain (MQM). Azo antoka fa ratsy tamin'ny olona izany hoe mpitarika misy mamono imasom-bahoaka izany saingy ny toe-draharaha nateraky ny vaovao momba ny famonoana azy dia niasa ho toy ny làlan-drivotra ho an'ny firenena izay efa sahirana ara-toekarena, sady nanome vahana ny fandrobàna vola sy sakafo ho an'ny andro manaraka. Noho izany nanomboka nandroba ny ATM (milina fisintonanana vola) sy ny banky ny olona ary nandoro azy ireny mba hamafàna ny porofon'ny fandrobàna. Namorona tontolo iray handrehetana ireo fankahalàna taloha ihany koa io tarehin-javatra io satria tsy misy ny lalàna nifehy.